War Deg Deg Ah Qarax Xoogan oo goordhaw ka dhacay Bakaaraha iyo Gaari ay wateen Ciidanka Dowlada oo gubtay | warsugansomaliya.wordpress.com
Waxaa Daqiiqado yar kahor Suuq Weyn ee Bakaaraha ka dhacay qarax Xoogan oo nuuca Bambada gacanta laga tuuro ah kaa oo lala eegtay gaari ay wateen Ciidanka Dowlada Federaalka Soomaaliya oo xiligaasi halkaasi marayay.
Qaraxa bambaano ayaa ka dhacay halka loo yaqaan Sarta Xaaji Cali Dheere ama Suuqa Sarifka waxaana lala eegtay gaari yar ay wateen ciidanka amaanka Dowlada Soomaaliya oo goobtaasi marayay .
Gaariga ay wateen Ciidanka Dowlada ayaa la tilmaamay in uu taagnaa xiligaasna rag aan la garan ay bambo dhaxda ka dhigeen gaariga sidaa uuna gaariga ku qarxay .
Goob jooge goordhaw la hadlay Shabakada Allbanaadir.com ayaa sheegay in markii Bambada lagu dhuftay Gudaha gaariga uu durba holcay in cabaar ahna uu gubanayay gaariga ilaa markii dambe lagu guuleestay in la damiyo.
inta la xaqiijiyay waxaa Qaraxaasi ku dhaawacmay ilaa Sadax Askari oo gaarigaasi saarnaa kuwaa oo hada dhaawacdooda loola carara Isbitaalada Magaalada Muqdisho si loo daweeyo
lama oga wax qasaaro ah oo soo gaaray dadkii rayidka ahaa ee ka agdhawaa goobta uu qaraxu ka dhacay , xaalada Suuqa Bakaaraha gaar ahaan goobtii uu qaraxu ka dhacay ayaa hada kusoo laabatay si caadi ah ganacsiga ayaana dib u furmay.
WAR DEG DEG: Faah faahin Hordhac ah Dhimashada dadka laxaqijiyey (Sawiro iyo vedio)
← Ciidamo Ethiopian ah oo ku wajahan degmooyin Shabaab ay ku xooganyihiin oo ku yaalla gobalada dhexe.
Muwaadin Soomaali ah oo xalay si Xun loogu dilay gudaha Dalka Koonfur Afrika (Aqriso Magaciisa) →